Ticking Time Bomb as Lack of PPE Slows Zimbabwe's Covid-19 Fight - allAfrica.com
Zimbabwe's biggest referral hospital, Parirenyatwa, has become a new hotspot for Covid-19 as senior health officials are reportedly forcing nurses to work without Covid-19 protective gear. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa's government has prohibited any form of partying during the 2020 festive season as Zimbabwe is not yet out of the Covid-19 pandemic risk. As of December 18, confirmed cases of Covid-19 from Zimbabwe reached 11,866. Reported deaths reached 314 and 9,836 people have recovered.
New Zimbabwe, 18 December 2020
Zimbabwe's biggest referral hospital, Parirenyatwa has become a new hot-spot for Covid-19 as authorities there are forcing nurses to work without personal protective equipment… Read more »
New Zimbabwe, 17 December 2020
Home Affairs Minister Kazembe Kazembe has prohibited any form of partying during the 2020 festive season as Zimbabwe is not yet out of the Covid-19 pandemic risk. Read more »
Illegal Covid-19 testing sites are mushrooming in the country as Zimbabweans intending to travel outside the country seek fake test papers to cross the national borders. Read more »
Zimbabwe: Workers' Miseries to Follow Them Into 2021 - Union
The Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) has lamented the continued impoverishment of employees saying workers will face a gloomy festive season with their miseries set to… Read more »
The Herald, 18 December 2020
MEMBERS of the public must continue abiding with the World Health Organisation guidelines on the prevention of Covid-19 that include hand washing with soap and clean water,… Read more »